Kuratidza zvinyorwa neelebheri kunaka kwemavhidhiyo
Netflix uye YouTube zvinosvibisa mhando yevhidhiyo
Kupararira kwegoronavirus pasi rese kwakaita kuti vanhu vazhinji vagare mudzimba. Vanhu vazhinji vanogara pamba nekuda kwezvikonzero zvekudzivirira, vese vachiedza kupfupisa kwenguva yakareba sezvinobvira. Kuona mavhidhiyo inguva inozivikanwa. Nekudaro, izvi zvinoremedza huwandu hwewebsite Internet. Netflix i YouTube izvi zvinoderedza kunaka kwemavhidhiyo epamhepo.
YouTube inoenderana nechikumbiro ichi. Izvi zvichaderedza vhidhiyo yekugadziriswa kusvika pa 30p kuyambuka muEurope kwemazuva makumi matatu. Kunyangwe vamiriri vepa portal vasati vazvisimbisa izvi, vanhu vanozokwanisa kuchinjira kuzvigadziriso zvepamusoro kana zvichidikanwa. Nekudaro, yakakwira 480K resolution haichazovapo.